CEEB: Ciyaartoy Caan Ah Oo Muuqaalo Laga Duubay Isaga Oo Falal Dhaqan-xumo Ah Ku Samaynaya Duurka - Gool24.Net
CEEB: Ciyaartoy Caan Ah Oo Muuqaalo Laga Duubay Isaga Oo Falal Dhaqan-xumo Ah Ku Samaynaya Duurka
Laacibkii hore ee xulka qaranka Argentina iyo Paris Saint-Germain ee Ezequiel Lavaezzi ayaa wacay qareennadiisa si ay u caawiyaan, kaddib markii laga duubay muuqaallo anshax xumo ah xilli uu bannaanka magaalada kula tumanayay dumar.
Weeraryahankan hore ee Napoli oo bishii December ciyaaraha kaga fadhiistay kooxda Hebei China Fortune oo uu sannadihii ugu dambeeyey u ciyaarayay, ayaa waxa uu u safray Jasiiradaha Carribbean-ka oo uu ugu dhacay xayiraadda fayraska Korona, waxaana halkaas ku wehelinaysay quruxleyda reer Brazil ee Natalia Borges.
35 jirkan ayaa bannaanka uga baxay magaalada, waxaanu sameeyey falal anshax xumo ah, waxaana laga duubay muuqaallo isaga oo galmo ku samaynaya kayn dhexdeeda.
Laacibkan ayaa loogu hanjabay in muuqaallada oo iskugu jira daawasho iyo sawirro lagu daabici doono baraha bulshada iyo Website-yada, haddii aanu bixinin lacago baad ah.
Sida uu qoray wargeyska La Nacion ee kasoo baxa magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentine, sawir kasta ama muuqaal kasta waxa lagu xidhay inuu bixiyo lacag dhan £4,000 dollar Gini, oo u dhiganta $A7,600 oo dollar-ka Argentine ah.
Wargeyska soo xiganayay ilo u dhow Lavezzi iyo Natalia, qolada ka duubtay muuqaalalda ayaa waxay ku hanjabeen inay iska fiiriyaan baraha bulshada iyo website-yada, haddii aanay lacagta intaas le’eg ka bixinin muuqaal kasta iyo sawir kasta, laakiin waxa aan la garanayn inta sawir ee ay ka qaadeen iyo tirada muuqaallada.
“Waxay bilaabeen inay qoraallo uga soo diraan laba baro bulsho oo Instagram ah. Kaliya isaga uun maaha, laakiin sidoo kale saaxiibaddii, quruxleyda Natalia Borges oo isaga la nool.” Ayey yidhaahdeen ilo-wareedyada la hadlay wargeysku.
Ilo-wareedyadani waxa kale oo ay sheegeen in muuqaallada laga duubay lammaanahan ay la socdaan codad, taas oo fadeexadda sii kordhin karta.
Lavezzi ayey qareennadiisu la xidhiidheen booliska Argentine, qaybta daba-galka dembiyada budhcadnimada Internet-ka.
Natalia oo iyadana ay da’deedu tahay 35 jir ayaa ah aktarad filimada metetsha, sidoo kalena ah quruxley dharka xayaysiisa, waxaanay hore ula soo saaxiibtay ciyaartooyo waaweyn oo kubadda cagta ah.
HASSANKAYD gilingil says:
Fadlan ha soo qaadanina wararka aan faa’iidada lahayn
Inagasoo haagajiya wax pageka ku xidhan
Waa haween caruur aan qaangaadh ahayn
Wararka keenaysaan ku ilaaliya diinteena suuban dhaqankeena wcn
ALLAH HA IDIN XIFDIYO